Xplay7 ကို 10 GB RAM နဲ့မကြာခင်ဖန်တီးတော့မယ့် Vivo! – AsiaApps
Vivo ဟာ Xplay7 ကို 10 GB RAM နဲ့မကြာခင်မှာပဲ ဖန်တီးထုတ်လုပ်တော့မှာပါ။ Xplay7 ကို ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်း CES မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Under-diplay (UD) fingerprint feature လည်းပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ UD fingerprint feature ကိုဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်ကျော်လောက်ကမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Vivo X20 Plus UD version မှာတွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။
The vivo Xplay7 will also likely inherit the under-the-display fingerprint scanner built by Synaptics and featured in the vivo X20 Plus UD.
Smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ RAM 8 GB ရှိတယ်ဆိုရင်တောင်တော်တော်များနေပါပြီ။ အခု Xplay မှာ RAM 10 GB တောင်ပါဝင်နေတယ်ဆိုတော့ လိုအပ်တာထက်ပိုတဲ့အဆင့်လို့ဆိုရမှာပါ။ ၂၀၁၆ မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Xplay6 တောင် RAM6GB ပဲပါဝင်ခဲ့တာပါ။
Coming to the Xplay7, the Snapdragon 845 processor will come accompanied bya10GB of RAM. While the 8GB RAM onasmartphone seems overrated, get prepared to soon see the first-ever smartphone with 10GB of RAM. It will be available in two variants with 256GB and 512GB of internal storage.
Xplay6 မှာတော့ CPU အပိုင်းက Snapdragon 820 ပါဝင်ခဲ့ပြီး Internal storage က 128 GB သာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်ရောက်ရှိလာမယ့် Xplay7 မှာတော့ CPU အပိုင်းမှာ Snapdragon 835 ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး Storage အပိုင်းကတော့ 256 GB နဲ့ 512 GB ဆိုပြီးနှစ်မျိုးထွက်ရှိမှာပါ။ ပြီးတော့ Xplay6ရဲ့ OS ဟာ Android 6.0.1 (Marshmallow) ဖြစ်နေပြီး Xplay7 ဟာတော့ Android 7.1 (Nougat) နဲ့ရောက်ရှိလာမှာပါ။ Android 8.0 (Oreo) ကိုတော့ ဖုန်းထွက်ရှိပြီးမှ upgrade လုပ်ပေးမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ ဘယ်တော့ရောက်ရှိလာမလဲ၊ ဘာတွေထပ်မံပြောင်းလဲသွားမလဲ ဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရဉီးမှာဖြစ်ပါတယ်။
vivo Xplay7 incoming with 10GB of RAM https://t.co/6J8lfPSVMK pic.twitter.com/FWu9VhFzAl
— GSMArena.com (@gsmarena_com) January 29, 2018
Android, New model, Rumors, Vivo